Nhau - Mutengo weAmazon FBA yekudzosa sevhisi haina kudhura?
Mutengo weAmazon FBA yekudzosa sevhisi haina kudhura?
Chekutanga pane zvese, nei zvigadzirwa zveFBA zvichifanira kudzoserwa kunzvimbo yekuchengetera mhiri kwemakungwa?
Nekuti maAmazon ane chirevo chakajeka kudaro: iyo imwecheteyo kodhi bar kodhi mune yekuchengetera, mwedzi mitanhatu haigone kudzokera kudura. Izvi zvinoreva kuti kana vatengi vakadzorera zvinhu, vatengesi havazokwanise kuzviisa pamashefu ekutengesa, zvinozotungamira mukuunganidzwa kwezvinhu, zvichikonzera kuoma kwemari yekushanda nedzimwe mamiriro, uye zvinokanganisa zvakanyanya kune vatengesi.
Panyaya yekudzosa imba yekudyira mhiri kwemakungwa, kana zvinhu zvacho zvakamira zvakanaka, vashandi vanokodzera vanozotsiva chitupa chezvinhu zvadzoserwa, kuitira kuti vadzokere kudura zvakare kuti vatengese.
Mazuva ano, huwandu hwakawanda hwenzvimbo dzekuchengetera mhiri kwemakungwa muUnited States dzese dziri kuratidza kudzoka uye kunongedza zvinhu zvekushandura zvinhu. Nekudaro, kazhinji, matura ekumhiri kwemakungwa anotambira vatengi kuti vadzorere zvakananga zvinhu kumatura ekumhiri kwemakungwa, saka kudzokororazve kunoitwa neimba yeFBA muUnited States. Vazhinji vatengesi veAmazon havanyatso kujekesa nezve nhanho dzeAmerican FBA inodzokera kune yekuchengetera mhiri kwemakungwa. Tevere, YiXing Global Logistics Xiaobian inokuudza nhanho chaidzo dzeFBA dzichidzoka kune yekuchengetera mhiri kwemakungwa.
Matanho eUS FBA yekudzosa mhiri kwemari yekuchengetera:
Mushure mekutaurirana nemutengi, mutengesi anofanirwa kuenda kune yekumashure manejimendi yeAmazon kuti awane inoenderana odha uye osarudza uye abvise. Wobva waratidza kero yeimba yekuchengetera mhiri kwemakungwa, uyezve mutengesi anogona kuita chaiko kushanda kweFBA kudzorera.
Mune ramangwana, mutengesi anofanirwa zvakare kuzadza tafura yezviverengero zvezvinhu zvinogadzirwa neimba yekudyira mhiri kwemakungwa, obva atumira iyo faira rePDF kudura repamusoro pekunze. Kana paine chiri kudiwa, imba yekuchengetera mhiri kwemakungwa inogona zvakare kubatsira nhumbi kushandura chitaridzi.
Mushure mekushandurwa kwechiraira, imba yekuchengetera mhiri kwemakungwa ichazadzwa uye yozotumirwa kune yakatarwa US FBA; Kana zvinhu zvangove mudura, mutengesi anogona kuzviisa pamashefu zvakare.
Mutengo weFBA Kudzoka Kumhiri Kwekunze Warehouse:
Kazhinji dzosera imba yekudyira mhiri kwemakungwa, ichaumba mari inoenderana yebasa, mubhadharo wemari uye mubhadharo wekutumira.
Mari yekuendesa inonyanya kukosha yekudzosera imba yekunze kune iyo FBA imba yekuchengetera uye mutengo wekutamisazve imba yekunze kune imba yeFBA. Mari dzeManagement mhedzisiro yezvinhu zviri kutorwa kubva mudura. Mari yekushandira inowanzo kuve FBA yekufambisa sevhisi uye mari yekunyora, uye muyero wekuchaja uri pachena.